स्थानीय तहमा पाएको मतलाई आधार मान्दा सुर्खेत क्षेत्र नं. १ बाट वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार शाहीले सहजै चुनाव जित्ने स्थिति देखिएको छ । सुर्खेत क्षेत्र नं. १ प्रतिनिधिसभामा अहिले धेरैको आँखा परेको छ । कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई वामपन्थीका साझा उम्मेदवार एवं एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष, युवा नेता धुव्र कुमार शाहीले चुनौती दिँदैछन् । एमाले–माओवादीबीचको वाम गठबन्धनले खड्कालाई जितको संकट परेको छ । खड्काले ०४८ यता सुर्खेत १ बाट अहिलेसम्म चुनाव हार्नुपरेको छैन । तर, यसपटक भने सुर्खेत १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका वामपन्थी उम्मेदवार शाहीलाई जित्नु खड्काका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा रहेका यी दुई पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।